Kedu ihe bụ Rakuten TV, ego ole ka ọ na -eri na ọwa ole ọ na -enye anyị | Androidsis
Kedu ihe bụ Rakuten TV, ego ole ka ọ na -eri na ọwa ole ọ na -enye anyị?
Ụlọ Ignatius | | Ngwa gam akporo, gụgharia
A mụrụ Rakuten dị ka ikpo okwu vidiyo na -enuba n'ọchịchọ, nke anyị nwere ike ịgbazite ma zụta ihe nkiri, ọkachasị ihe nkiri a na -egosi. Agbanyeghị, ka oge na -aga, ọ nabatala n'ụzọ ọhụrụ iji rie ọdịnaya site n'aka ndị ọrụ ma na -enyekwa ọrụ TV nkwanye ugwu akpọrọ Rakuten TV.
Rakuten TV bụ ọrụ efu kpamkpam nakwa na a na -echekwa ya na mgbasa ozi. N'adịghị ka nyiwe ndị ọzọ yiri ya, dịka TV Pluto, iji nwee ike iji Rakuten TV ịkwesịrị ịdebanye aha. Ihe kpatara ya abụghị ihe ọzọ karịa ikwe ka onye ọrụ nọrọ otu nzọ ụkwụ ịgbazite ma ọ bụ zụta ihe nkiri ọ bụla nke ikpo okwu a na -enye anyị.
Ozugbo anyị doro anya na Rakuten TV bụ ikpo okwu mgbazinye ihe nkiri yana na ọ na -enyekwa anyị ọdịnaya n'efu site n'usoro ọwa isiokwu, anyị ga -egosi gị otu o si arụ ọrụ, ọwa ole ọ na -enye anyị, ebe ọ dị ...
Photocall TV: otu esi lelee ihe karịrị 1.000 ọwa n'efu na naanị ntakịrị pịa
1 Otu Rakuten TV si arụ ọrụ
2 Kedu ihe anyị ga -ekiri n'efu na TV Rakuten
3 Ọwa ole ka Rakuten TV na -enye anyị?
4 Kedu ụdị igwe Rakuten TV dị na ya
5 Rakuten TV na Pluto TV
Otu Rakuten TV si arụ ọrụ
Rakuten na -enye anyị site na ịnweta ngwa ya na ọwa niile ikpo okwu a na -enye anyị. Ọwa ọ bụla nwere usoro iheomume, ya bụ, anyị enweghị ike ịnweta ọdịnaya mgbe ọ bụla anyị chọrọ mana anyị ga -enwerịrị na -echere oge a ga -agbasa ihe omume a, ihe nkiri ma ọ bụ usoro anyị chọrọ ịhụ.
Ebuputara ikpo okwu ọhụrụ a na mbido 2021, yabụ n'oge a, ịnweta ọwa niile ka dị na beta n'oge mbipụta akụkọ a (Ọgọst 2021) ma enwere ike nweta ha site na Samsung na LG smart TV.
Otú ọ dị, n'ihi na nweta ọdịnaya niile ihe nkiri efu na -enye dị ka ịnweta mgbazinye na ịzụrụ ihe nkiri izizi, enwere ike ịme ya na nyiwe niile ebe Rakuten nọ.
Ka ọ dị ugbu a, anyị amaghị mgbe ọ ga -ekwe omume ịnweta mmemme nke ọwa niile nke ọrụ a na -enye anyị, mana ọ nwere ike bụrụ tupu njedebe nke 2021.
Kedu ihe anyị ga -ekiri n'efu na TV Rakuten
Na mgbakwunye na ịnweta ihe karịrị ọwa telivishọn 70 kpam kpam n'efu, anyị nwekwara ohere ịnweta fim ole na ole kpam kpam n'efu, yana mgbasa ozi na -egosi nkeji iri na ise ọ bụla.
Ihe nkiri niile dị n'efu site n'elu ikpo okwu a Edebere ha na ngalaba ndị a:
Nhọrọ kacha mma nke ihe nkiri
Ihe nkiri ihe nkiri
Ihe nkiri ọchị
Ihe nkiri ezinụlọ
Ihe nkiri egwu
Ihe nkiri ịhụnanya
Ihe nkiri sinima nke Spanish
Fim akụkọ ifo
Planet Junior TV
para nweta ọdịnaya a, anyị ga -pịa okwu ahụ GRATIS nke dị n'elu ihe nchọgharị ma ọ bụ chọọ nhọrọ a n'ime ngwa anyị na -eji.
Ọwa ole ka Rakuten TV na -enye anyị?
Ugbu a, Rakuten TV na -enye anyị nweta ihe karịrị ọwa 70 kpam kpam n'efu. Agbanyeghị, ọtụtụ n'ime ha dị n'asụsụ Bekee ma ha anaghị enye ohere ịgbakwunye ndepụta okwu na vidiyo, nke a bụ otu n'ime isi ihe adịghị mma.
Site na Rakuten TV anyị nwere ike nweta ọwa TV nke weebụsaịtị ụfọdụ dị ka Ndewo, Bloomberg ma ọ bụ The Hollywoord Reporter na -enweghị ịga n'ihu.
Ihe Nkiri kachasị
Filmstream (dị na Bekee)
Oge ojiri gaa
Net Time Movie Network
BatteryPop (dị na Bekee)
Ụlọ akwụkwọ mara mma (dị na Bekee)
Tankee Site na egwuregwu (dị na Bekee)
ZooMoo (dị na Bekee)
Brad TV (dị na Bekee)
Ụwa nke obere
Asọmpi ọgụ siri ike
Njem Poker ụwa (dị na Bekee)
Fuel TV (dị na Bekee)
FTF maka ndị egwu
Lax Sports Network (dị na Bekee)
ESTV (dị na Bekee)
EDGESport (dị na Bekee)
Poker Night TV (dị na Bekee)
Egwu Baeble (dị na Bekee)
Billboard (dị na Bekee)
Ihe nkiri Qello site na Stingray (dị na Bekee)
Karaoke Stingray (dị na Bekee)
Egwu Latido (dị na Bekee)
Stingray Hot Country (dị na Bekee)
Stingray Soulstrom (dị na Bekee)
Ihe kacha mma Stingray
Stingray: Ndepụta ndepụta (dị na Bekee)
Stingray: Classica (dị n'asụsụ Bekee)
Clubbing TV (dị na Bekee)
Qwest TV Jazz na Beyond (dị na Bekee)
Qwest TV Classical (dị n'asụsụ Bekee)
Ngwakọta Qwest TV (dị na Bekee)
So Yummy (dị na Bekee)
GoTraveler (dị na Bekee)
Agụụ na -agụ (dị na Bekee)
Gusto TV (dị na Bekee)
Motorvision.tv (dị n'asụsụ Bekee)
Ike (dị na Bekee)
Ihe ngosi ụgbọ mmiri (dị na Bekee)
Travelxp (dị na Bekee)
Chọrọ Africa (dị na Bekee)
Mkpokọta Pet (dị na Bekee)
Ndị mmadụ mara mma
Agha dara (dị n'asụsụ Bekee)
Ihe egwu Bar Bar (dị na Bekee)
Chive TV (dị na Bekee)
Onye nta akụkọ Hollywood
Ndị mmadụ TV (dị na Bekee)
VENN (dị na Bekee)
Egwuregwu BCC (dị na Bekee)
Revry (dị na Bekee)
Ebe nkiri TV (dị n'asụsụ Bekee)
Ejiji TV (dị na Bekee)
Froot TV (dị na Bekee)
Insight TV (dị na Bekee)
Hollywood na -eto eto
Comedy Dynamics (dị na Bekee)
Nledo ihu igwe (dị na Bekee)
Singray Naturescape (dị na Bekee)
Reuters (dị na Bekee)
Holywire (dị na Bekee)
Bloomberg Quicktake (dị na Bekee)
Kedu ụdị igwe Rakuten TV dị na ya
Dị ka ezigbo ikpo okwu nke chọrọ inwe ihe ịga nke ọma n'ahịa, Rakuten TV dị ma na ya igwe igwe onyonyo (Samsung, LG, Sony, Philipcs, Panasonic na Hisense), dịka smartphones na mbadamba iOS na gam akporo, dịka ọ dị Nintendo na Sony consoles.
Na mgbakwunye, enwerekwa dị site na weebụ iji nweta ọdịnaya ya site na ihe nchọgharị ma na -akwadokwa Chromecasts site na Google.
Rakuten TV na Pluto TV
Ma Rakuten TV na TV Pluto bụ ikpo okwu na -enye anyị ohere ilele ọwa telivishọn site na nkwanye n'efu na mgbasa ozi. Agbanyeghị, Rakuten TV na -enye anyị ọdịnaya n'ime ihe nkiri n'efu, ọbụlagodi na nke a abụghị ezigbo mma.
Ọdịiche ọzọ m kwuworo n'elu, bụ iji TV Rakuten ịkwesịrị ịmepụta akaụntụ, akaụntụ nke na -enye anyị ohere iji otu ọpịpị ọdịnaya dị na mgbazinye ma ọ bụ zụta site na ikpo okwu a, nhọrọ adịghị na TV Pluto.
Ihe dị na Pluto TV dị, kachasị na SpanishỌ bụ ezie na ikpo okwu Japan bụ Rakuten TV, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdịnaya niile dị n'asụsụ Bekee na enweghị nhọrọ ịgbakwunye ndepụta okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Kedu ihe bụ Rakuten TV, ego ole ka ọ na -eri na ọwa ole ọ na -enye anyị?
Mobiles iri kacha arụ ọrụ nke Ọgọst 10
Samsung Galaxy Z Flip 3 nke ọma: Ọdịdị apịaji emeziri emezi, Nguzogide mmiri, Ngosipụta 120Hz, na ndị ọzọ